Vanhu pamusoro pePost, Vanhu pamusoro Pazvibato | Martech Zone
Vanhu pamusoro pePost, Vanhu pamusoro Pabatiri
Chipiri, May 7, 2013 Douglas Karr
HubSpot yakaunza Yemagariro Inbox, chishandiso chitsva chinobatanidza zvemagariro midhiya kuongorora uye kutsikisa neHubSpot yekubata dhatabhesi, zvichigonesa vashambadziri kugadzira maonero akaparadzaniswa ezvekudyidzana kwevatungamiriri vavo, vatengi, uye vaparidzi vakuru. Iko kubatanidzwa kutsva kunodzora ruzha runosanganisirwa nekuteerera midhiya enhau, inonyevera makambani kune vanhu vakakosha vanoda mhinduro, uye inopa mamiriro ekudyidzana kwemasocial media, kutsiva matekiniki ane ruzha uye anokanganisa nekutengesa vanhu vanoda.
Akakosha mabhenefiti echishandiso chitsva anosanganisira:
Kubatanidzwa neHubSpot's Contacts Dhatabhesi: HubSpot inozoenderana otomatiki tarisiro, lead, kana yevatengi account yeTwitter yakavakirwa paemail uye inodhonza yakazara yakazara yeumwe neumwe wekudyidzana kwavo nekambani yako kusvika zvino, kuti iwe ugone kugadzirisa mhinduro dzako nerumwe ruzivo uye mamiriro. Yemagariro Inbox inozivisawo chero tweet kubva kune mumwe munhu ane zita rakafanana nerokubata kubva kudhatabhesi yako, kuti iwe ugone kuenderera nekuvaka mapepa ekutaurirana.
Chikamu Kuongorora uye Alerts: Dambudziko rakamira kwenguva refu revashambadzi ihwo huwandu hwedata ravanofanira kusefa naro zuva nezuva. Yemagariro Inbox inoita kuti makambani akurumidze uye nyore kusimudzira masocial media zvikamu zvevanhu vanokosha, kuti vaone nyore nhanho yehupenyu hwemunhu akapihwa mukati meSocial Inbox chishandiso, uye kumisikidza zviyeuchidzo zvinoenderana nezvakakosha zveiyo brand yako, kubva muchikwata uye kukwikwidza kuongorora kusvika kutevera kiyi yekutenga zviratidzo.
Kubudirira uye Kubudirira Kunze kwekushambadzira: Maumbirwo uye mashandiro eSocial Inbox zvinoita kuti zvive nyore uye zvisina musono zvekutengesa uye mamaneja masevhisi kuti awedzere iwo maitiro echishandiso akaiswa futi. Zvikurukuru, zviziviso zveapplication nharembozha zvinobvumidza mamaneja ekutengesa kuti agamuchire zviyeuchidzo zvekusunda zvichibva pane zvataurwa nezvavanotungamira. Iko kusanganisa kweSocial Inbox neiyo HubSpot's email chishandiso zvakare inobvumidza vashandi vevashandi kuti vapindure vakananga kumibvunzo yevatengi paTwitter ine yakasarudzika email.
Actionable Analytics: Vatengesi vachiri kunetsekana nekuyera kudzoka pane zvemagariro enhau, asi HubSpot's Inbox Inbox inobvumidza vashambadziri kuti vaone kushanya kwakawanda, zvinotungamira, uye vatengi zvakagadzirwa neimwe yega yega media media chiteshi. Uye zvakare, vashandisi havaone kwete chete huwandu hwese hwekudzvanya kana kudyidzana neyakagovaniswa mugove, asi zvakare mazita eumwe neumwe wekutaurirana uyo airatidza kufarira iyo tweet.
Yemagariro Inbox inoita pasocial media mutambo wechikwata. Makirabhu ekutsigira anokwanisa kutevera pazvikumbiro zvebasa neemail; vashambadziri vanogona kushandura iyo yekufona kuti iitwe pane peji rega rega tarisiro kana kutungamira kushanya kunoenderana nekwaari iye mune yavo yevatengi hupenyu hwekutenderera; uye zvikwata zvekutengesa zvinogona kuisa zvemagariro enhau zvinotungamira mune yakakodzera kutungamira yekurera mushandirapamwe. Pamusoro pekuve wega wega, Yemagariro Inbox inopa yakazara suite yezvishandiso nezvibatsiro zvinowedzera kupfuura kupfuura kushambadzira kusanganisira kutengesa uye masevhisi.
Kusimudzira kuvhurwa, Hubspot akagovana iyi infographic pasocial media kushambadzira.
Tags: hubspothubspot social mediapasocial media inboxSocial Media Marketingsocial media nzira
Zuva Muhupenyu HweInternet
Zvikwata, Colors uye Emotion
Chishandiso chakanakisa kubva kuHubspot, iwe unofanirwa kuyedza izvi uye kuzvionera wega! Great post!